စူႈနဏတႈလ႕ဎြၚအပူၚယတဘဥစူႈနဏတႈလ႕ ပတႈအိဥအဖီခိဥန႔ဥတဂ့ၚန႔ဥလီၚ (၁၇.၁၁.၂၀၂၁) | Radio Veritas Asia
စူႈနဏတႈလ႕ဎြၚအပူၚယတဘဥစူႈနဏတႈလ႕ ပတႈအိဥအဖီခိဥန႔ဥတဂ့ၚန႔ဥလီၚ (၁၇.၁၁.၂၀၂၁)
တနံၚလ႕တႈအိဥမူလ႕တႈတီတႈလိၚဒီးတႈမုဏတႈခုဥအပူၚပကနဥဟူဘဥန႔ဥယမ့ႈ၀ဲဒဥTrusting in God ,not possessions စူႈနဏတႈလ႕ဎြၚအပူၚယတဘဥစူႈနဏတႈလ႕ Possessionပတႈအိဥအဖီခိဥန႔ဥတဂ့ၚန႔ဥလီၚ.
ဒီပုႈ၀ဲႈပွၚဒိကနဥတႈဖိသ့ဥဧ႕ယတႈလ႕တႈပ်ံၚတႈဖုးန႔ဥ မ့ႈ major obstacle တႈမၚကီမၚခဲပွၚအဒိဥအဎိဏတမံၚလ႕ပသူဥပသးအပူၚယလ႕ပကဟ့ဥနီၚလိဏသးလ႕တဂၚဒီးတဂၚအအိဥန႔ဥလီၚ.ပပ်ံၚပဖုးတႈဒ္လဲဥယပပ်ံၚဖုးတႈလ႕ပမ့ႈဟ့ဥနီၚလီၚပတႈအိဥတႈဎဲၚယတႈထူးတႈတီၚသ့ဥတဖဥဒီးလ႕ပသူဥပသးပူၚတႈသူဥဖွံသညီတအိဥလ႕ၚဘဥအဃိဒီးမ့တမ့ႈ ပဘဥဎိဏလ႕ပမ့ႈဟ့ဥလီၚပွၚဂၚပတႈအိဥတႈဎဲၚဒီးပတႈအူလ႕ခံဆူညါအဂီႈယတႈကီတႈခဲတုၚအိဥဘဥပွၚအခါယပတႈဖိတႈလံၚကဘဥလ႕ပွဲၚဧါတလ႕ပွဲၚလ႕ၚဧါန႔ဥန႔ဥလီၚ.တႈန႔ဥအဃိယပတဥဎိဏဒီးပ်ံၚတႈလ႕တႈဘဥဟ့ဥနီၚဖးလီၚတႈန႔ဥလီၚ.
ဒီပုႈ၀ဲႈပွၚဒိကနဥတႈဖိသ့ဥဧ႕ယတႈစူဥတႈနဏဒီးတႈအဲဥဎြၚမ့ႈအိဥသပွႈကတ႕ႈန႔ဥဒီးတႈသူဥကိႈသးဂီၚတအိဥလ႕ၚဘဥလ႕ပတႈအိဥမူပူၚလ႕ၚဘဥဒီးတႈအဲဥတႈကြံဒီးတႈနီၚလီၚဟ့ဥလီၚလိဏသးသနဏက့မ့ႈဟဲကဲထီဥ၀ဲဒဥလ႕ပဂီႈညီညီဖိန႔ဥလီၚ.တႈလ႕ပွၚကဲးသလ့းဖိတဖဥဒိးန႔ႈဘဥ၀ဲတႈပနီဥစီဆွံတဖဥယလီၚဆီကတ႕ႈယမ့ႈလ႕ ကိဥဘူဥစီဆွံတႈပနီဥန႔ဥယ မ့ႈဎြၚဟ့ဥနီၚ လီၚဘဥပွၚအနီႈကစႈယအသူဥအသးလ႕ပအိဥယဒ္သိးပကဘဥအိဥမူပတႈအိဥမူဒီးဆီတလ႕ကြံဏပသူဥပသးဆူတႈဂ့ၚတႈ၀ါအပူၚဒီးဟ့ဥနီၚ လီၚပတႈအဲဥဆူပွၚ ကိးဂၚအအိဥန႔ဥလီၚ.